Nandrava tanàna indray ny afo. Tranombarotra miisa dimy, miaraka amin’ny trano mifanila aminy miisa efatra no indray nirehitra teny Faravohitra, omaly maraina, noho ny fitobahan’ny menaka tao amina toeram-pivarotana mofo. Ankoatra ireo entana maro isan-karazany …Tohiny
Niditra tamin’ny andro fahefatra ny « Festival Tamaga Midôla » omaly. Hetsika ara-panatanjahantena karakarain’ny fikambanana Tafaray, ary tanterahina eny amin’ny tora-pasik’i Toamasina. Araka ny efa notaterina teto amin’ny gazety, taranjam-pifaninanana efatra: beach soccer, beach volley, …Tohiny
Atao ny 8 hatramin’ny 14 oktobra izao, any Mahajanga ny fivoriana tanora kristianina na JMJ. Ao anatin’ny fotoanan’ny fivorian’ny olona maro avy amin’ny faritra samihafa toa izao, dia mety hisy trangana voina na aretina miseho. …Tohiny
Voapaingotra. Tsy mitsahatra handrenesam-baovao ny fahatrarana teratany malagasy manondrana zava-mahadomelina mahery vaika any ivelany. Tsy lazaina intsony ireo teratany vahiny efa tratra teto amintsika nikasa hanaparitaka izany. Araka ny efa fahita, rehefa tsy sarona eto …Tohiny